नक्कली भनेर किनेकाे हिराको औंठीले ३० वर्षपछि बनायो यसरी करोडपति ! – Online Khabar 24
नक्कली भनेर किनेकाे हिराको औंठीले ३० वर्षपछि बनायो यसरी करोडपति !
October 3, 2021 by admin admin
एजेन्सी – ३० वर्षअगाडि एक महिलाले एउटा औंठी किनेकी थिइन् ।
त्यति बेला कुनै दिन त्यही औंठीले नै उनी करोडपति बन्नेछिन् भन्ने उनलाई थाहा थिएन । वास्तवमा डेब्रा नामकी ती महिलाले एक सेलबाट १० पाउन्डमा उक्त औंठी किनेकी थिइन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
औंठीको मूल्य थाहा भएपछि डेब्राले त्यसलाई लिलाम गर्ने निर्णय गरिन् । लिलामको मूल्य र कर तिरेपछि डेब्राले करिब ६० लाख डलर प्राप्त गरेकी थिइन् । उनी आफ्नो घरमा करिब २० बच्चाको रेखदेख पनि गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘यो हाम्रो राम्रो कामको फल हो ।’ यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevयि १० काम गर्नुहुन्छ भने तपाँर्इको मृगौला बिग्रिने खतरा एकदमै ज्यादा छ ।
nextद्वन्द्वमा दुई छोरा गुमाएकि आमा – प्रचण्डले मेरा छोराको रगतको महत्त्व बुझेनन्